News | किम
News | Tag: किम
किमको गर्जनः उत्तर कोरियाको रणनीति कसैले रोक्न सक्दैन
एजेन्सी । उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ–उनले सत्तारुढ वर्कर्स पार्टीको कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेता किमले उत्तर कोरियाको परमाणु हतियार तथा सैन्य क्षमता बिस्तार गर्ने पनि घोषणा गरेका छन्।
उत्तर कोरियामा किमको क्रुरता, विदेशी रेडियो सुनेको आरोपमा एकजना माझीलाई गोली हानी मृत्युदण्डको सजाय
एजेन्सी । उत्तर कोरियामा एक जना ४० वर्षिय मार्झीलाई गोली हानी मृत्युदण्ड दिइएको छ ।
एजेन्सी । उत्तर कोरियामा कोरोना संक्रमणको एउटा पनि रिपोर्ट बाहिर आएको छैन । तर, मिडिया रिपोर्टका अनुसार उत्तर कोरियाका शासक किम र उनको परिवारले कोरोना भ्याक्सिन लगाएका छन् ।
किन राम्रो छैन किम र वाइडेनको सम्बन्ध ?
एजेन्सी । उत्तर कोरियाका शासक किम जोंग उन अमेरिकाका राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा जित हात पारेका जो वाइडेनप्रति मौन रहेको छ । उत्तर कोरिया न्युक्लियर मिसाइलका लागि विश्वभर चर्चामा रहेको थियो ।
उत्तर कोरियाका शासक किम जोंग उनले पहिलोपटक माफी मागे, आँखामा आए आँसु !
एजेन्सी । उत्तर कोरियाका शासक किम जोंग उनले पहिलो पटक आफ्नो असफलताका लागि जनतासँग माफी मागेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
विश्वलाई नै आश्चर्यचकित पार्ने गरी उत्तर कोरियाले आयोजित गरेको सैन्य परेड (फोटोफिचर)
एजेन्सी । उत्तर कोरियाले सत्तारुढ वर्कर्स पार्टीको ७५ औँ वर्षगाँठको अवसरमा हालसम्मकै दुर्लभ सैन्य परेड गरेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार नेता किम जोङ–उनको उपस्थितिमा शनिबार उज्यालो हुनुपूर्व उत्तर कोरियाले भव्यरुपमा सैन्य परेड गरेको हो ।
किमद्वारा विश्वभरका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सुस्वास्थ्यको कामना
एजेन्सी । उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले महामारीको वेवास्था गर्दै गरिएको सैन्य परेडमा शनिबार विश्वभरका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सुस्वास्थ्यको कामना व्यक्त गरेका छन् ।
किमबारे बोले जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री
एजेन्सी । जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री योशिहिडे सुगाले उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोन अनसँग भेट्न चाहेको बताएका छन् । उनलाई आफुले विना शर्त भेट्न तयार रहेको पनि उनले शुक्रबार स्पष्ट पारेका हुन् ।
उत्तर कोरियाका शासक किम जोंग उनले माफी मागे
एजेन्सी । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–अनले यसैसाता उत्तर कोरियाली सैनिकले चलाएको गोलीबाट कोरियाली नागरिकको मृत्यु भएको भन्दै क्षमा मागेका छन् ।